पोर्चुगल भर्सेज स्पेन : रोनाल्डोले तोड्लान त स्पेनिस पर्खाल ? - पोर्चुगल भर्सेज स्पेन : रोनाल्डोले तोड्लान त स्पेनिस पर्खाल ?
पोर्चुगल भर्सेज स्पेन : रोनाल्डोले तोड्लान त स्पेनिस पर्खाल ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १ असार, 02:09:47 AM
काठमाडौँ, १ असार । विश्वकप फुटबलमा नेपाली फ्यानले पनि आज राती कुरिरहेको खेल हो, स्पेन र पोर्चुगलबीचको भिडन्त ।
रियल मडिडका सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोका कारण धेरै नेपाली फ्यान पोर्चुगलका छन् । त्यसमा पनि रोनाल्डो भएकै कारण धेरैजसो फ्यान आज राती पोर्चुगलले जित्छ भन्नेमा बाजी लगाईरहेका छ्न ।
तर टिमगेमका रुपमा स्पेन विश्वकै उत्कृष्ट टिम हो । सन् २०१० को विश्वकप जितेको स्पेनिस टोली आफ्नो टिकीटाका खेल शैलीबाट विश्वकै चर्चित छ ।
स्पेनिस टोलीमा विश्वकै उत्कृष्ट मिडफिल्डर आन्द्रेस इनिष्टा, डेभिड सिल्भा र डिफेन्डर सर्जियो रामोस तथा जेरार्ड पिके भएकाले विश्वकपको उपाधि उचाल्ने क्षमता स्पेनसँग छ ।
फरवार्ड र डिफेन्डरको भिडन्त
आज मध्यराती पोर्चुगल र स्पेन भिड्दा स्पष्ट रुपमा देखिनेछ, रामोस र पिकेको आँखा क्रिष्टियानो रोनाल्डोमाथि हुनेछ ।
उनीहरु दुई जनाको पहिलो र एउटै काम हो, रोनाल्डोलाई रोक्ने । यी दुई विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरले जसलाई जतिबेला पनि रोक्न सक्छन् । यसअघि सन २०१२ को युरोकपमा स्पेनले रोनाल्डोलाई सेमीफाइनलमा घर फर्काएका थिए ।
रोनाल्डो फेरी यस्ता खेलाडी हुन्, जसले चाहने हो भने जोसँग जस्तोबेला पनि गोल गरेर खेल जिताउन सक्छन् । सन २०१६ मा पोर्चुगललाई अप्रत्याशित रुपमा युरोकप जिताएका रोनाल्डो मैदानको छेउमा उभिदिने मात्रै हो भनेपनि पोर्चुगल टिम विपक्षीमाथि धावा बोल्न सक्छ ।
उसका पछाडी विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरमध्येका एक पेपे छन् । रोनाल्डोका रियल टिममेट पेपे एक्लै पनि डिफेन्समा निकै बलिया खेलाडी हुन् । त्यसमाथि रुई प्याटिसियो जस्ता गोलकिपरले पनि पोर्चुगल कमजोर देखिदैन् ।
स्पेनमा रोनाल्डोको अभाव
यदि रुसमा डियगो कोष्टा र मार्कोस अलेन्सियोले धुवाँधार गोल गर्ने हो भने निसन्देह स्पेनले विश्वकप जित्न सक्छ । तर यी दुई फरवार्ड अहिले त्यति लयमा छैनन् । जति रोनाल्डो छन् ।
एक्लै गोल गरेर रियललाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका रोनाल्डो जस्तो खेलाडी अहिले स्पेनसँग छैन । मिडफिल्डर इनिष्टा र सिल्भाले गोल गर्ने क्षमता राखेपनि विपक्षी रोनाल्डोको जस्तो गोल मेशिन फरवार्डको अभाव स्पेनिस टिममा देखिन सक्छ ।
गोल गर्न नसकेपनि स्पेनले पोर्चुगललाई सजिलै जित्न दिने सम्भावना पनि छैन् । किनकी उसका डिफेन्डर बार्सिलोनाका पिके र रियलका रामोस विपक्षी टिमका लागि पर्खाल जस्तै हुन् । जो सानो तिनो प्रहारले भत्किदैनन् अर्थात ढल्दैनन् ।
२०७५, १ असार, 02:09:47 AM